Mountains Giant (German Isergebirge, Polish Góry Izerskie, slang uyewo inonzi Jizerky) inonzi geomorphological total uye nechokumaodzanyemba kwezvikomo zveCzech Republic. Makomo emakomo akatumidzwa zita reMvura yeJizera, iyo inosvika pamitenho yeSmrk, gomo rakakwirira muCzech chemakomo. Yakanga yakamboonekwa sechikamu chekumadokero cheGiant Mountains. Chikamu chayo chikuru chiri muPoland, uko nzvimbo yakakwirira pane yose yeJizerské Mountains yose ndiyo Wysoka Kopa (1126 m).
Around pamakomo muguta Liberec, Frydlant, Raspenava, New Town pazasi spruce, Świeradów-Zdroj, Szklarska Poreba, Desna, Tanvald uye Jablonec nad Nisou. Mukutaura kwemasango ekuparadzanisa, chiCzech chikamu chemakomo zvakatarwa chiri Liberec, Jablonec nad Nisou uye Semily Liberec.
Pro Mountains Giant inzvimbo dzakagadzikana zvakagadzirirwa munzvimbo dzakakwirira dzichiita nzvimbo dzakakwirira-dzakadzika, dzinobva kune zvikomo zvegranite uye kune zviduku zvisina kuvhara zvine mapegi akawanda.
Mountains Giant parutivi zvinotevera zviumbu geomorphological (kubva kuchamhembe zvichienderana Kutenderera) Frýdlantská Upland, Kotlina Jeleniogórska, Giant Krkonošské mezvikomo ještěd-kozákov akatevedzana uye Žitava bheseni. Zvikwata zvakapoteredza (kunze kweGiant Mountains) zviri Mountains Giant zvakanyatsoparadzaniswa. Somuenzaniso, rwokumusoro yakatenuka Frydlantske uplands, achifumira pamusoro pomupata Smědá ane hama yakakwirira 500 m. West Jizersky akafanana rinobuda kumusoro kwomupata akatevedzana uye Kwisa Small Kamienna. Muchikamu chekumaodzanyemba, makomo emakomo anoenda zvakanaka kusvika mubhedheni reRiberec, asi yakavharwa ne18 km neAlack Crest Ridge refu.
Mu Jizera Makomo, kune zviuru zve28 zviuru (zvinokwirira nepamusoro pamusoro peM XMUMM mamita uye mukurumbira pamusoro pemamita 1000). Vamwe mabhuku regai asi White rufu (5 m) avete pakati pigeonloft uye Montenegro millirem (m 1007) riri kumaodzanyemba Jizera kana spruce, zviduku nhamba Smrku chete shure muganhu Polish-Czech. Asi pane dzimwe nguva, dzimwe nguva inotaurwa nezveSwieradowiec, asi haisi gomo rakasiyana, asi chete kudzokera kweLużce.
MuCzech chikamu chemakomo kune 15 zviuru zvezvikomo uye zvizhinji zvadzo zvinopedzwa nemarombo akasiyana-siyana. Vanewo chigaro zvikuru zvakadzama - 7 wavo ane mukurumbira (kukwirira kubva chigaro) dzinenge 100 M VaPolish chikamu Zvisinei 13 zviuru, kusanganisira soro Wysoka Kopa, avo chimiro,, kwakasiyana, dombo idzodzo ari ndoda, makomo dziri vainyanya sandara pates. uye zvisingatauriki zvisdles. Kunze kwe Wysoke Kopy, hapana chikwata chakakurumbira kupfuura mamita 60.
Itafura inotevera inoratidza zviuru zvehupamhi hwepamusoro, zvakakurumbira uye kuparadzana. Zvinofadza kuti Jizera ane mukurumbira wakakwirira kudarika Smrk, gomo rakakwirira muCzech chikamu chemakomo. Pane zvinopesana, Smrk ine nzvimbo yakasarudzwa kupfuura Wysok Kopa, gomo rakakwirira kupfuura rose re Jizera. Chimwe chinokwezva ndiko kukurumbira kweChiný vrch, iyo ine urefu 1026 m ku17. akakwirira, asi 4. iyo yakakurumbira-chiuru cheZiza.
Pakuguma kweproteozoic neAssynth wrinkle, gomo guru rakagadzirwa nekutambudzwa uye zvakasimuka mumunda we Jiiza Mountains nhasi. Zvisinei, panguva yeiyo 200 millennium, gomo iri raive rakanyatsoenderana, uye muSiriurian, nzvimbo iyi yakazara negungwa. Munguva iyi yose, maviri pluton, ayo nhasi anoumba hwaro hwemakomo akareba, akaonekwa pamusoro. Iyo basilica yakasimbiswa mune rimwe bhokisi rakapetwa naKaleon. Chimiro chemazuva ano chekusunungurwa chakaumbwa nemamwe maitiro maviri: Hercynian folding uye Saxon kufamba muTestariary. Yaiva panguva iyi apo paiva nekuputsa kwavakanga vari Mountains Giant yakasimbiswa. Gwagwa rakaputsika rakachengetedzwa, somuenzaniso, kumucheto wekumusoro kwe Špičák, Ořešník, Frýdlantské warments.
Yanhasi kutungamirira dombo massif vari girenayiti matombo - granite. Vakasvika kumeso nekubudisa pachena mapuloni maviri asingagumi. Kubva girenayiti mitumbi idzi vakura Chemnitz pluton, izvo runosvika kumakomo nechokuchamhembe inonzi Rumburk girenayiti. Panguva yacho solidifying pluton exchange ichi kumanikidzwa netembiricha vakuru matombo - dombo - iri schist vari Somuenzaniso, Mika ubvise makomo ari kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva. In izvi svor posterior kuti mineralization (deposits kuti gaba pa New Town pazasi spruce) uye gare gare kuti they gush chicherwa zvitubu (Libverda, Czerniawa Zdrój Świeradów-zvinyorwa). Yematombo uye dolomite Anoumba karusiyamu Hill muna Raspenavy vakanga vatendeukira machena. matombo Most vari metamorphosed gneiss dzichiumbwa jizerské Polish High Jizera muhomba uye gomo Smrk. Pamusoro New Town ndeimwe kubereka schists - leptinytu. Metamorphic mabwe zvakare Železnobrodská shales uye quartzites (White Rock pa Prichovice).
Chechipiri, Krkonoše-Jizerská pluton inenge nzvimbo inobva kuCrastava kusvika kuSněžka. Iyo yakave yakagadzirwa uye granite yayo inoumba huwandu hweJizerskohorské rock formations. Muzvikomo zvepamusoro, zvicherwa zvinowedzera, kunyanya basalt. Miti mikuru yebasalt ndiyo Bukovec nad Jizerkou uye Buková pedyo neJiřetín. Munguva yechitanhatu, Jizera Mountains yakanyongedzwa chete munzvimbo, nyika yegungwa yakamira pamakomo avo ekuchamhembe. Kunyange zvakadaro, gwenga reJizera Mountains rakaratidza. Somugumisiro wekutsvaira kwechando, pane masangano akadai sechando makamuri uye masvingo ematombo. Zvimwe zvinogadzirwa nematombo mumakomo makabheti ane matombo, vicaras uye matombo ematombo.
Kuvonga nzvimbo yavo Jizera Mountains ine ruzivo rwakanyanya rwemvura. Makomo emakomo aya anotungamirira kugovana pakati peGungwa reBaltic neNorth Sea. Kubva kumadokero nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, mvura yeLužická Nisa inoyerera ichienda muchiteshi cheZittau kuGungwa reBaltic. Chimwe chezvikwereti zvavo ndeyeSměda, ichidonha kuchamhembe kwemakomo. Zvimwe zviitiko zvinokosha ndezviJeřice, Řasnice uye Lomnice. Kune rumwe rutivi rwePoland, kune nheyo dzinokosha Bobr, Kamienna uye Kwisa. Kumabvazuva uye kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemahara kwakasvibiswa neJizzerou kupinda muElbe uye saizvozvo kuNorth Sea. Yake inonyanya kukosha ndeye Kamenice.
Maji peat bogs anokosha zvikuru pamubati wemvura. Iyo peat bog, iyo ndiyo miti yakakura yemakomo, inogona kuchengetedza mvura yakawanda yemvura mumasero ayo - kusvika makumi maviri pane iyo inorema. Izvi zvinokonzera kubuda uye ku-humidification kwegomo microclimate. Panguva imwechete iyo inononoka kutonga kwemhepo.
Mvura yemvura chete yemvura yeGizera Mountains iine peat dzimba uye madziva. Pakuguma kwe19. kwemazana emakore, zviduku, zvigadziriswa-zvinangwa zvemvura zvakagadzirwa mumakomo kuti ashumire mashizha uye magirazi. Mushure memvura inoparadza ye29. 7. 1897 apo Mountains Jizerské akawira chinyorwa kunonaya, kwakasarudzwa kuti vadzivirirwe zvimwe zviitiko zvakadaro kuvaka madhamu akawanda. Nokuda kwechikwata chekuvaka Water Cooperative chakatangirwa kugadzirisa rwizi ruchiyerera nekuvaka madhara muGorge Gorge, Purofesa Otto Intza akagadzira madhes matanhatu. Yaiva yekutanga muganhu dhamasiko muCzech Republic, iyo yakaunzawo zvinetso munguva yayo. Pakupedzisira, shanu dzematombo ematombo akaoma akavakwa, uye kuvakwa kwedamu paJeřice kwakanga kusina kuitwa. Harcovská dhamu rakapera, Bedrichovska Dam, Mníšecká Dam, dhamu Mlýnický uye Jablonec dhamu. Mamwe madzimai maviri - ino nguva yakasaswa - mubhedha reKizera yakapedzwa mu1915. Mumwe wavo, dzimba re White White, rakashungurudzika gore rakapera. Chechipiri, Souš Reservoir, nhasi inoshandiswa semvura yekunwa yeJablonec nad Nisou. Mvura yemvura yeRiberec uye Českolipsko ((zvakare zvakare dope) gungwa remvura Josefův Důl, rakavakwa mumakore 1976-82.
Zvirongwa zveHurumende yeZvirwo zveCzech Republic zvinosanganisira zvitatu zvakasiyana uye zvitatu zvekupemha munzvimbo iri pedyo neHejnice. Zvisinei, maererano nemanzwiro mazhinji, hapana chikonzero chekuvaka, pamwe chete nemafashamo uye kuchinja kwakanyanya munzvimbo dzakachengetedzwa dzemakomo.
Prachov Rocks muBohemian Paradhiso
1 awa yapfuura
Matongo eimba iyo Trosky Bohemian Paradhiso
1 Day yapfuura
Mireniyuta isingakanganwiki muti wemarimu muTatobiti
2 mazuva yapfuura
3 mazuva yapfuura
Kurambidza mambure pa Štěpánky kutarisa shongwe
4 mazuva yapfuura
www.PetrPikora.com zvakavanzika Policy Copyright © mutauro tuma Archivbox Emba Nheyo yezivo Mibvunzo nemhinduro Catalogue Sitemap
© 2019 naPetrPikora.com. Zvose Zvakachengetedzwa.